Bhupal's #bhul - Bhupal Sapkota
Maha Jodi #fotosoto
The place nearby my office at Jwagal, run by Mohit ji, attracts these personalities occasionally. Was there to eat some food withafood master talking about how tech can leverage the talents of master chefs. And suddenly - Maha / मह . चिना हराएको पुस्तक लेखेर थप गुन लगाउनु भयो हरिवंश दाईले । Posted By: @bhu1st
कसले भनेर हुन्छ र - जिन्दगी यसो सही अनि त्यसो गलत । भोग्दै जाने हो, झेल्दै जाने हो । हिन्दै गर्दा बाटोमा लाग्न सक्ने ठेस र केराका बोक्राहरु आयसी टर्छन । यात्रा सुरु हुँदा सोच बनाउन, भबितब्यको लेखा-जोखा राख्न र एउटा खाका बनाउन सकिएला तर समय धाराको टूटी खोलेको र बन्द गरेको जस्तो गर्दै मात्रा मिलाएर उपयोग गर्न अनि टूटी आधी थुनेर प्रेसरमा टाढा पुर्याउन मिल्ने चीज हैन । परिस्थितिहरुले मागेको अबस्थाको भोगी बन्नु कसैको चाह बनिदिन्छ अनि कसैको बाध्यता । यो दुनिया मान्छेको हो । मान्छेले बनाएको हो । यसमा कसरी जुझ्ने भन्ने मान्छेको मनको कुरो हो । आफ्ना सोच, सिप, अनुभब र सपनालाइ सर्बस्व सुम्पेर समयसँग टिक टिक हिड्न नसक्नु आफ्नो कमजोरी हो । र त्यो आफ्नो कमजोरी हो भनेर बुझ्न, आत्मसाथ गर्न र त्यसलाई सुधार्न लागी पर्न नसक्नु रोग हो । पीडा हो । बन्धन हो । परिबन्धन हो । निर्भरता हो । सन्कोच हो । बोझ हो । अबुझ हो । अज्ञान हो । जिद हो । अन्धकार हो । अशिक्षा हो । दृश्य, लबज, बासना, स्वाद र स्पर्स बुझ्ने तन्तु हरुले सन्तुलिन क्रियाकलाप गर्न सकेनन भने मान्छेले सुन्दैन, बुझ्दैन अनि मनन गर्न सक्दैन र आफुलाई आफ्नो रुपमा स्विकार्न सक्दैन । मैले म यस्तो छू भनेर आफैले नमाने अरु कोले मान्ला र । आफुलाई नचिन्ने ले अरुलाई कसरी चिन्ला र । आफूले बोलेको आफूले मात्रै सुन्दा मजा आई राख्दैन । त्यसैले सम्बाद जरुरि छ । तर आफ्नो समय, नितान्त आफ्ना सोच हरुको समय हो । आफूले सुन्न बोल्नु पर्दैन, मनन र चिन्तन जरुरी छ । त्यो गर्न धैर्यता जरुरी छ । यी क्षणिक पलहरु मा हुने कुरा हुन । बुझाई झिल्को जस्तो हुन्छ, एक पलले मान्छे अर्कै मान्छे बनाई दिने तागत राक्छ । र परिबर्तन यिनै कुनै एक पलबाट सुरु हुने कुरो हो । समय यस्तो बनीदियो की मान्छे चाहेर पनी चिन्तन गर्न नसक्ने अबस्थामा छ । प्रबिधिको बिकासले अरु र आफ्नो बिचको दुरी घटायो तर आत्मीयता ? आत्मीयता पूर्ण भोगाई हो । सम्पूर्ण इन्द्रियले भोगेको आत्मीयता केबल हेराई र सुनाइले प्रगाढ नबनाउला । र त एक दुई फिट दुरिमा कुनै माहोल जमाएर आँखामा आँखा जोरेर बोलीको रिदममा झुलेर चियर्स गर्दै मारेका बातहरुको घनत्व बढी हुने । ज्ञानी हरु आफ्ना इन्द्रियहरु आफ्ना लागी बनेका हैनन भन्छन। आँफू खाऊ आँफू लाऊ र आँफै बोलुँ अनि सबै मैलेई भनेको होस । यस्तो सोच मनमा बारम्बार आउछ भने त्यो प्राणी स्वार्थी हो । स्वार्थी हुनु नराम्रो भनेको हैन, बस के भने त्यसको बिपरीत सोच्ने हरु पनी छन भनेर स्विकार्नु पनी सक्नु पर्छ भनेको हो । प्रख्यात जति छन सबै जन्मे त अरु कसैका लागी जन्मे तर जीबन सरल र जिबनमा सन्तोष यो बुझाईले देला र ? बुझाई, भोगाई र गराईको सहकार्य सम्भब छ ? सहकार्य को लागी स्पष्टता जरुरी छ, स्पस्टताको लागी सम्बाद । एउटा चारकुने बाक्सा अघि बसेर प्रबिधिको माध्यमले दिनमा सय ब्यक्ति सँग चिरबिर गर्दा उपलब्धि ठान्ने जमातमा कफीको चुस्की लिदै बैचारिक बिबादमा रम्नुको अर्थ बुझ्ने छैनन भनेको हैन । छन् । तर के भने जिन्दगि परिकार भए बुझाई, भोगाई अनि साथ त्यसका स्वाद हुन् ।
Posted By: Bhupal Sapkota